I-PlayWM, i-Qtile, i-Ratpoison, i-Sawfish ne-Spectrwm: ama-WM amanye ama-5 we-Linux | Kusuka kuLinux
I-PlayWM, i-Qtile, i-Ratpoison, i-Sawfish, ne-Spectrwm: ama-WM ahlukile ama-5 we-Linux
Namuhla siyaqhubeka nesethu okuthunyelwe kwesikhombisa mayelana ne Abaphathi bamawindi (Abaphathi beWindows - WM, ngesiNgisi), lapho sizobuyekeza khona okulandelayo 5, kusuka ohlwini lwethu lwe 50 okuxoxwe ngaphambilini.
Ngaleyo ndlela, ukuqhubeka nokwazi izici ezibalulekile zazo, njengokuthi, ingabe zikhona noma cha amaphrojekthi asebenzayo, ukuthi Uhlobo lwe-WM yibo, okungokwabo izici eziphambili, futhi zifakwa kanjani, phakathi kwezinye izici.
Kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi uhlu oluphelele lwabaphathi bamawindi abazimele nabondliwayo of a Imvelo yedeskithophu Ngokuqondile, kutholakala kokuthunyelwe okuhlobene okulandelayo:
Abaphathi bamawindi: I-Graphical User Interfaces ye-GNU / Linux
Futhi uma kwenzeka ufuna ukufunda ifayili lethu le- okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene Lapho i-WM yangaphambilini ibuyekeziwe, okulandelayo kungachofozwa izixhumanisi:
2BWM, 9WM, AEWM, Afterstep futhi Awesome
IBerryWM, iBlackbox, iBSPWM, iByobu neCompiz
I-CWM, i-DWM, i-Enlightenment, i-EvilWM ne-EXWM
I-Fluxbox, i-FLWM, i-FVWM, iHaze neHerbstluftwm
I3WM, IceWM, Ion, JWM ne-MatchBox
I-Metisse, i-Musca, i-MWM, i-OpenBox ne-PekWM
1 Ama-WM amanye ama-5 weLinux
Ama-WM amanye ama-5 weLinux
Ngokuya ngewebhusayithi yayo esemthethweni, ichazwa njenge:
“Imenenja ehehayo yabathandi bekhompyutha. Idizayinelwe ukukwazi ukudlala ngezilungiselelo zakho. Ngendlela yokuthi wonke umsebenzisi onelukuluku, hhayi ama-Linux Geeks athuthukile kuphela, angashintsha ukubukeka kwawo futhi asebenzise indlela yokuziphatha kwideskithophu namawindi abo. Futhi kulula ukuyisebenzisa, ngenxa yesiqalo sayo esisheshayo esizenzakalelayo esigwema ukufunda yonke imibhalo edingekayo".
Iphrojekthi engasebenzi: Umsebenzi wokugcina utholwe cishe eminyakeni engaphezu kwengu-7 edlule.
Inikeze ukulungiswa okuhle kakhulu (ukusetha) kanye nobuhle besixazululo esilungele ukusetshenziswa.
Yayinezici ezithokozisayo noma ukusebenza ngesikhathi sayo, njengokuvela obala kubha yomsebenzi kanye nokuma okuzenzakalelayo kwamawindi athile, ngenxa yokuhlelwa okuhlelekile okuhleliwe.
Ivumele ukushintsha zonke izici zayo, ngoshintsho oluncane olwenziwe kumafayili wombhalo abhalwe kahle. Konke endaweni eyodwa, ngokucushwa kabusha kokulayisha kabusha. Kumkhombandlela we- ~ / .playwm ungathola wonke amafayela wokumisa wezinto ezahlukahlukene ze-PlayWM. Ngamafuphi, yakhiwa ngezicelo ezahlukahlukene ezihlanganiswe endaweni eyodwa, ngaphansi kwemibhalo emihle futhi ecacile ebhalwe ngendlela yokuphawula.
Okulandelayo kunikwe amandla wokulanda nokufaka isixhumanisi.
“Umphathi wewindi ophelele wohlobo lweTiling, obhalwe futhi walungiswa ePython".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina utholwe ngaphansi kwenyanga edlule.
I-Tipo: Ukulingisa. Yize, abaningi bathambekele ekubhekeni njengohlobo lweDynamics.
EKuyinto elula, encane futhi enwebekayo. Futhi ikuvumela ukuthi udizayine kalula futhi ufake owakho umklamo, amawijethi nemiyalo, ukuze ukwandise futhi ulungise ukugeleza kokusebenza emvelweni wokuqhafaza ngendlela yokusebenza komsebenzisi.
Kubhaliwe futhi kwalungiswa ngokuphelele ePython, ukuze kusizakale wonke amandla nokuguquguquka kwalolu limi futhi ululungise nezidingo zabaningi.
Unomphakathi osebenzayo futhi okhulayo, obolekisa njalo ukusiza abanye.
Kuyinto ngokuphelele Free and Open Source Software, futhi ibuye isatshalaliswe ngaphansi kwelayisense evumayo ye-MIT.
Ngeminye imininingwane mayelana nokulandwa kwayo, izindaba nokufakwa kwayo, izixhumanisi ezisemthethweni ezilandelayo ziyatholakala: Isixhumanisi se-1, Isixhumanisi se-2 y Isixhumanisi se-3. Futhi lokhu okunye isixhumanisi sangaphandle ukuthola eminye imininingwane esemthethweni.
“IMenenja elula yeWindow engenakho ukuncika kumtapo wezincwadi, engenayo ihluzo zikanokusho, imihlobiso yamawindi e-clunky, futhi engancikile egundaneni. Ihlelwe kakhulu ngemuva kwesikrini se-GNU esenze izimangaliso emakethe yokugcina ebonakalayo.".
Iphrojekthi engasebenzi: Umsebenzi wokugcina utholwe ngaphezu kweminyaka emithathu edlule.
Ivumela isikrini ukuthi sehlukaniswe ngozimele abangagqagqani. Futhi ukuthi wonke amawindi agcinwa enziwe angcono ngaphakathi kozimele bawo ukusebenzisa kakhulu isikhala sangempela sesikrini esisetshenzisiwe.
Ilungiselelwe ngefayela lombhalo elilula. Futhi inikeza ukuxhumana okunethezeka nokushesha ngokusebenzisa ukucindezela okhiye. Ngaphezu kwalokho, inemephu eyisiqalo yokunciphisa ukuthepha kokhiye okukhubaza ama-Emac nezinye izingcezu zekhwalithi zesoftware.
Ingasebenza njengesiqalisi sohlelo lokusebenza nebha yesaziso. Ibha yayo yolwazi iboniswa kuphela lapho idingeka, futhi ayifaki ithreyi yohlelo.
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- iphakethe le-ratpoisonNgakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
"NOMAn imenenja yefasitela enwebekayo esebenzisa ulimi lokubhala olususelwa ku-Lisp. Inqubomgomo yabo incane kakhulu uma iqhathaniswa nabaphathi bamawindi abaningi. Umgomo wakho umane nje ukuphatha amafasitela ngendlela eguquguqukayo futhi ekhangayo ngangokunokwenzeka. Yonke imisebenzi esezingeni eliphakeme le-WM iyenziwa eLisp ukuze ikhuliswe noma ichazwe kabusha ngokuzayo".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina utholwe eminyakeni engaphezudlwana kwengu-3 eyedlule ngokukhishwa kwenguqulo yayo yakamuva # 1.12.90, kepha esizeni sayo seGitHub ukuzibophezela kwayo kokugcina bekungaphansi kwenyanga edlule.
Inamandla amakhulu okubopha ukhiye, okusho ukuthi cishe yonke imisebenzi enikezwe iSawfish ingaxhunyaniswa nezinkinobho (noma izinkinobho zegundane).
Inikeza ukuphatha okuhle kakhulu kwemicimbi, ngakho-ke ungenza ngezifiso indlela ezophendula ngayo kubo.
Ivumela ukuphathwa kokuqondana phakathi kwamawindi, ukuphatha ukwenza lokho lapho amafasitela athile ehlangana nemithetho ethile, athobela izenzo ezithile ngokuzenzekelayo.
Ineqoqo elihle lamatimu aguquguqukayo, ekuvumela ukuthi udale izingqikithi ezihluke kakhulu kunalezo ezikhona. Futhi, inezinhlobonhlobo ezinhle zezindikimba ezivela eceleni ezitholakalayo.
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- iphakethe le-sawfishNgakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi noma laba abanye: isixhumanisi 1 y isixhumanisi 2.
"NOMAn Imenenja yewindi encane futhi enamandla yeX11 ezama ukuphuma endleleni ukuze sonke isikhala sesikrini esibalulekile sisetshenziselwe izinto ezibaluleke kakhulu kumsebenzisi".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina utholwe cishe ezinyangeni ezingaphansi kwezingu-3 ezedlule ngenguqulo yayo yakamuva ekhishwe (3.4.1), yize ukwenziwa kwamuva kwakhulunywa ngakho.
Inamanani wokucushwa okuzenzakalelayo alungile kakhulu, futhi ayidingi ukufunda ulimi lohlelo ukwenza noma yiziphi izinguquko zokumisa. Kodwa-ke, ibhalwe ngabaduni kubaduni, futhi ilwela ukuba yincane, ihlangane, futhi isheshe.
Ukudalwa kwayo kwakugqugquzelwe kakhulu yi "xmonad" kanye ne "dwm" WMs. Ukuthatha okusemandleni akho womabili, ukudala i-WM eqinile, ephelele kepha ephathekayo futhi engalungiseka.
Ikhishwa ngaphansi kwelayisense ye-ISC. Futhi ama-patches akho angamukelwa, inqobo nje uma nawo enelayisense nge-ISC.
Ezinye izinto eziphawulekayo zifaka phakathi: Ukuxhaswa kweRynamic DyR, noma yikuphi ukuzulazula kwazo zonke izikrini ngekhibhodi noma ngegundane, ibha yomumo enziwa ngezifiso, ifayili lokumisa elingafundwa ngabantu, liqale phansi ngaphandle kokulahlekelwa ukuzinza, imenyu yokuqala ngokushesha futhi amawindi angangezwa noma asuswe endaweni enkulu.
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- iphakethe "spectrwm"Ngakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana nalezi ezi-5 ezilandelayo «Gestores de Ventanas», ezimele kunoma iyiphi «Entorno de Escritorio»ubizile I-PlayWM, iQtile, iRatpoison, iSawfish neSpectrwm, yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-PlayWM, i-Qtile, i-Ratpoison, i-Sawfish, ne-Spectrwm: ama-WM ahlukile ama-5 we-Linux
Kubonakala kimi ukuthi isithombe-skrini se-WM ngayinye sizoba sikhombisa kakhulu, kepha ngiyabonga ngolwazi 🙂
Sanibonani, Chiwi. Siyabonga ngokuphawula kwakho. Kungakuhle impela, kepha njengoba ukubukeka kwama-WMs ngamunye kuguquka ngokuhamba kwesikhathi, okuhle ukuya ezixhumanisweni ezisemthethweni ngayinye bese ubona ngqo izithombe-skrini ezisemthethweni ezinikezwa ngonjiniyela bazo. Impela akubona bonke abanikeza izithombe-skrini, kepha iningi liyakwenza futhi livuselelwe, inqobo nje uma kungamaphrojekthi asebenzayo.
I-Android 11 isivele ikhishiwe, yazi izinguquko zayo ezibaluleke kakhulu nezindaba
IHuawei ihlela ukwethula iHarmonyOS esikhundleni se-Android ngo-2021